TIFF 2021: 'Tsy reniko ianao' dia manome tahotra ara-pianakaviana
Home Sarimihetsika mahatsiravina TIFF 2021: 'Tsy reniko ianao' dia manome tahotra ara-pianakaviana
by Kely McNeely Septambra 14, 2021
by Kely McNeely Septambra 14, 2021 216 hevitra
Mpanoratra / talen'ny Kate Dolan's Tsy reniko ianao dia fientanam-po amin'ny folklore miovaova any Irlandy, ary endrika voalohany tena matanjaka. Natao tamina teti-bola kely ary napetraka manodidina ny festival of Samhain, dia fampisehoana manaitra avy amin'i Dolan (izay sarimihetsika fohy Catcalls azo jerena ao amin'ny Shudder, ho an'ireo liana).
Tsy reniko ianao manaraka an'i Char (Hazel Doupe), tanora mangina izay miaina fiainana manirery. Ny reniny tokan-tena Angela (Carolyn Bracken) dia nijaly tamin'ny fahaketrahana izay matetika mitazona ny fandriana ary tsy afaka manao ny andraikiny amin'ny maha-ray aman-dreny. Taorian'ny hetsika tsy fahita firy maraina dia nanjavona i Angela, ny fiaran'ny fiarany dia nilaozana an-tsokosoko tany an-tsaha. Rehefa tafaverina izy dia toa… tsy dia marina loatra. Ny fihetsika, ny fihetsika ary ny toetrany dia miova amin'ny fomba tena miavaka. Misy zavatra hafahafa amin'ny maman, ary i Char dia tonga tamin'ny famaranana mampatahotra. Tsy reniny io.
Doupe sy Bracken dia manana simia mahafinaritra izay mivoatra rehefa mandroso ilay sarimihetsika. Amin'ny sehatra voalohany, i Char sy Angela dia manana rindrina azo tsikaritra eo anelanelan'izy ireo izay mampita tantara mampalahelo; Nalevina ao ambadiky ny sosona sy ny potipoti-javatra i Angela, ary efa ela i Char no nanandrana namoaka azy.
Rehefa miseho indray i Angela aorian'ny tsy fahatongavany tsy fantatra, tsy hain'i Char ny mandray ny fijerin'ny reniny tampoka sy tsy nampoiziny. Tahaka ny zaza nilaozana rehetra, faly izy fa toa niverina tany aminy ny reniny - nanatrika teo am-pientanam-po ary nandroaka azy tamim-pitiavana tena tsy azony. Fa miaraka amin'izay dia misy ny fisalasalana hino azy marina. Tena mahavariana tokoa i Doupe amin'ny famoahana ireo fihetsem-po mifaninana ireo. Izy dia mitondra fahalemena izay lasa matahotra kokoa satria lasa tsy fantatry ny toetrany tanteraka i Angela.
Tsy mampino i Bracken, mampihetsi-po ny fihetseham-po isan-karazany amin'ny hafanana tsy mitovy. Milatsaka amin'ny anjara asany izy - ara-batana sy ara-tsaina - miaraka amin'ny fampisehoana izay saika hipnotika amin'ny halaliny. Ny mpilalao dia ahitana an'i Ingrid Craigie amin'ny maha Rita (renin'i Angela ary reniben'i Char), mpitandrina miafina ao amin'ny fianakaviana. Rita dia mitazona fahaiza-manao izay harafesin'ny fahasahiranana ara-batana sy vesatra ara-pihetseham-po an-taonany maro. Mahatsiaro ho tsy misy ilana azy ny toetrany, fa raha ny marina dia tsy ny tantarany ifantohantsika izany.
Tsy reniko ianao dia sarimihetsika mandrosoa ho an'ny vehivavy, miaraka amina mpilalao vehivavy ary tsy dia mifanakalo hevitra momba ny lehilahy lahy; tsy maheno momba ny dadan'i Char isika, ary tsy misy teti-dratsy tantaram-pitiavana tsy ilaina, mifantoka amin'ny finamanan'ny vehivavy fotsiny. Iray amin'ireo mpampijaly an'i Char, Suzanne (Jordanne Jones), nifamatotra moramora tamin'i Char noho ny tantaram-piainan'izy ireo tamin'ny fiainam-pianakaviana nisahotaka. Tsy misy fotoana i Suzanne misalasala na mandà an'i Char, izy dia tena namana tsy miantra, izay tena ilain'i Char.
Hitanay ny horonantsary nanova teo aloha tamin'ny horohoro (toy ny sarimihetsika Irlandey mitovy amin'izany Ny Hallow ary Ny lavaka amin'ny tany), fa misy zavatra atao amin'ny fanaovana ilay ahiahiana ho olon-dratsy ho reny - fa tsy zanaka na fikambanana ara-batana hafa - mahomby kokoa izany.
Niova tanteraka i Angela nandritra ny horonan-tsary, nanjary mikorontana kokoa rehefa mandeha ny fotoana. Tsikaritr'i Char ireo fihetsika hafahafa ireo, saingy sarotra ny manaiky fa misy zavatra hafa mety ho tsy mety. Na eo aza ny zava-manahirana azy ireo, tia ny reniny i Char, ary na dia misy ifandraisany sy tsy mampihontsina azy aza ny fihetsiny, dia vao mainka sarotra ny manatsoaka hevitra fa mety hisy zavatra mihoatra ny voajanahary ao amin'ilay fifangaroana, indrindra amin'ny tantaran'ny renin-drainy.
Toa an'i Natalie Erika James ' vakoka, Tsy reniko ianao mpisolelaka amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ny andraikitra sy adidy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Dolan dia nanoratra izany tamim-pitandremana sy fangorahana fatratra ho an'i Char tanora, izay mahatsiaro ho irery sy irery na eo aza ny fanohanan'ny dadatoany sy ny renibeny ary ny ezaky ny mpampianatra azy tany am-pianarana.
Manomboka amin'ny isa melankolika ka hatrany amin'ny sinematograpia misokatra nefa akaiky, Tsy reniko ianao manana endrika atmosfera mandihy manodidina ny zava-doza, nefa tsy milavo lefona tanteraka. Ny sarin'i Dolan dia manana ny herin'ny afomanga Samhain: mitresaka sy mirehitra izy, miaraka amina famaranana setroka izay manome lanja ny fanahin'ny Halloween.
Tiako ny horohoro “tanora atahorana”, ary Tsy reniko ianao dia manana fampiasa tena tsara sy milanja tsara an'io trope io. Izy io dia tantaram-piainana atosiky ny vanim-potoana amin'ny fararano miaraka amin'ny fampitahorana vita amin'ny laoniny tsara izay miankina amin'ny fahombiazana fa tsy siny-dra.
Raha mitady endri-javatra avo roa heny ianao doppelgänger, ampifanaraho ity iray ity Ny lavaka amin'ny tany. Tsy hijery ny fianakaviananao intsony izany amin'ny fomba hafa.
Raha mila bebe kokoa amin'ny TIFF 2021, zahao ny anay famerenana ny Rob Savage's Dashcam